ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာ ဘိဝံသ
Centre for Buddhist Studies (CBS)
Mahāsubhodayon Monastery Sagaing Hills, Sagaing, Myanmar
Institute of Dhamma Education (IDE)
Institute of Dhamma Education (IDE) Dhamma-Sahaya Sasana Centre Aungchanthar, Pyin Oo Lwin (33/2 miles post of Mandalay – Pyin Oo Lwin Road) Phone: (+95) 09-5120377
Yangon- Mandalay Highway Road, mile post7mile6pharlon, Hlegu Township, Yangon.
၂၀၁၉ နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူး ပြည်သူ့ဥယျာဉ် အထူးဓမ္မသဘင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့က၊ဦးစီးကျင်းပသည့်၊ တတိယအကြိမ်မြောက်၊နှစ်သစ်ကူး၊ အထူးဓမ္မသဘင်ကို၊ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌၊ ယနေ့၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ( ၂)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်၊ ကျေးဇူးတော်ရှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံ (Ph.D) အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ (သ.စ.အ)ဓမ္မာစရိယ ပါဠိပါရဂူ အရှင်သူမြတ်မှမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြီးမားသော မဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဟောကြားသောမူခဲ့သော တရားတော်ကို ယနေ့ညနေခင်း (၇:၃၀)နာရီတွင် ဟောကြားဆုံးမ ပေးသနားတော်မူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်း တရားနာ ကြွရောက်နိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ #တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမများ။ #ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဓမ္မသဘင် Live အင်တာနက်စာမျက်နှာ မှတိုက်ရိုက် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပါမည်။ Credit Ko Kyaw Thin #AshinNandamalabhivamsa www.drnandamalabhivamsa.com.mm
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်၏ နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဦးမင်္ဂလာ သြဝါဒကထာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူး အခါသမယသည် လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအားလုံးအတွက် မင်္ဂလာရှိသော အခါသမယဖြစ်ပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရဟန်းရှင်သူ ပြည်သူအားလုံး ရွှင်ပြုံးဝမ်းသာ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီ ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြပြီးလျှင် အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အရှည်ခန့်လျက် တည်တံ့စေရန် ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်၊ ထက်သန်သော လုံ့လဝီရိယ၊ ညီညွတ်သောစိတ်ထားဖြင့် အမြော်အမြင်ကြီးမားစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ..ဟု မင်္ဂလာမေတ္တာစကား တိုက်တွန်းပြောကြားအပ်ပါသည်။ သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။ #AshinNandamalabhivamsa www.drnandamalabhivamsa.com.mm
ကျေးဇူးတော်ရှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ အရှင်သူမြတ်မှ (၇) ရက်တိုတိုင် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော် ၌ နိဗ္ဓာန်ရောက်ကြောင်း တရားရေအေးတိုက်ကျွေးဆုံးမပေးသနားတော်မူပါမည်။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်၏ သက်တော်(၇၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် IDE ဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာ
မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတကသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်ရှိ သဒ္ဓမ္မဘာကရစေတီတော်တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပထမအကြိမ် မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိကာယ ဝိနယာနုဂ္ဂဟ စာတော်ပြန်ပွဲ
ကျင်းပမည့်နေ့ ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၆၊၇၊၈) ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၉၊၃၀)ရက်မှ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ထိ ကျင်းပမည့်နေရာ တပ်ဦးမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် စစ်တက္ကသိုလ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။ ကျင်းပမည့် အစီအစဉ် ပထမေန႕ ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၆)ရက်၊ ၂၉-၆-၂၀၁၃(စနေနေ့) နံနက်(၉)နာရီ စုဒ္ဒသမ ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှ သြဝါဒခံယူခြင်း (၁) ရှင်ကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစာတော်ပြန် (၂) ပါတိမောက် ဝိနည်းစာတော်ပြန် နေ့လည်(၁)နာရီ (၁) ရှင်ကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစာတော်ပြန် (၂) ရှင်ကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစာတော်ပြန် (၃) ပါတိမောက် ဝိနည်းစာတော်ပြန် ဒုတိယေန႕ ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်(၇)ရက်၊ ၃၀-၆-၂၀၁၃(တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက်(၈)နာရီ (၁) ရှင်ကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစာတော်ပြန် (၂) ပါတိမောက် ဝိနည်းစာတော်ပြန် နေ့လည်(၁)နာရီ (၁) ရှင်ကျင့်ဝတ် ဝိနည်းစာတော်ပြန် (၂) […]
M.A., Ph.D., Aggamahãpandita Rector International Theravãda Buddhist Missionary University Dhammapãla Hill, Mayangone, Yangon, Myanmar
Copyright © 2022 Ashin Nandamālābhivamsa. All Rights Reserved.
5BB BROADBAND Global Technology Co., Ltd မှ ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များ သုံးစွဲသူ Internet User များမှစုပေါင်း လှူဒါန်းသော" “ငါကိုယ်တိုင်ပြု ဤကောင်းမှုကံ မြတ်နိဗ္ဗာန် လျင်မြန်ရကြောင်းဖြစ်စေသော်”